'IT: Isahluko Sesibini' kubandakanya i-Iconic Adrian Mellon Scene, uqinisekisa umbhali
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'IT: Isahluko Sesibini' kubandakanya i-Iconic Adrian Mellon Scene, uqinisekisa umbhali
by UMichael Carpenter Ngamana 13, 2019
by UMichael Carpenter Ngamana 13, 2019 1,400 imbono
Njengomntu othanda inoveli kaStephen King IT, ngokukhawuleza kuyacaca ukuba asisoze silungelelanise ngokuthembekileyo. Zombini ii-miniseries zika-1990 kunye nomlawuli we-Andy Muschietti's bhanyabhanya ka-2017 uphambukile kule ncwadi ngeendlela ezinkulu, kwaye IT: Isahluko sesibini ijongeka ngathi iza kwenza okufanayo.
Ukubeka ecaleni inyani yokuba kukho izinto ezimbalwa ndingathanda ndingaziboni zilungelelanisiwe, ngenxa yezizathu ezicacileyo, ndiye ndavumelana nenyani yokuba akukho luhlengahlengiso luya kuyibamba ngokupheleleyo incwadi kaKing. Ngokunyaniseka, mhlawumbi zezona zilungileyo, kuba sele silifundile eli bali.
Enkosi entsha THR udliwano - ndlebe IT: Isahluko sesibini Umbhali wescreen uGary Dauberman nangona, sinokuphumla ngokulula sisazi ukuba ubuncinci obulandelelanayo obuza kwenza ifilimu ezayo. UDauberman uqinisekisa ukuba ukubulawa kuka-Adrian Mellon kuya kulungiswa.
Ngumboniso obonakalayo encwadini kwaye enye besifuna ukuyifaka kumdlalo bhanyabhanya. Kuluhlaselo lokuqala kule mihla kaDerry kwaye ibeka inqanaba lokuba uDerry ube yintoni. Yimpembelelo yePennywise nangona elele, kwaye bububi obucocekileyo okwenzekayo kuAdrian. Abaxhaphazi basebenza ngePennywise kwakubalulekile ukuba sibonise. ”
Kwabambalwa abangazange bafunde IT, U-Adrian Mellon wayeyindoda e-gay ngaphandle kweqabane lakhe uDon xa wayehlaselwa liqela lezigebenga ezithandanayo. UMellon waphoswa phezu kwebhulorho kwaye wankqonkqoza, emva koko ngokoyikiswa wagqitywa nguPennywise owayelindile.
Lo mbono awuhoywanga ngokupheleleyo yimisebenzi yenkonzo yowe-1990, nangona ilungile, ezi bhanyabhanya zimbini zidibeneyo zineeyure ezintathu zokujonga ixesha lokusebenza. Ndiyathemba ukuba uDauberman, uMuschietti, kunye nabasebenzi benza le nto ibaluleke kakhulu neyoyikisayo.